Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Otu onye ọrụ nwụrụ, atọ n'ụlọ ọgwụ n'ihe mberede ụlọ ọrụ nuklia Spain
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Sustainability News • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ụlọ ọrụ nuklia Ascó dị na Catalonia, Spain
A nyochara osisi Ascó maka ntapu radieshon na ngalaba 1 reactor na Nọvemba 2007.
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ asaa na ụgbọ ala mberede ahụike anọ ka ebugara n'ụlọ ọrụ ike nuklia Acó na Catalonia, Spain n'abalị a n'ihe dị ka elekere asaa nke mgbede oge obodo ka a kọchara nnukwu ikuku carbon dioxide n'ụlọ ọrụ ahụ.
Otu n'ime ndị ọrụ ihe metụtara anwụọla, a kpọgakwara mmadụ atọ n'ụlọ ọgwụ ngwa ngwa ka ihe ndị ọchịchị obodo na-enyo enyo na ọ bụ oke ụgwọ na usoro nchebe ọkụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị na-ahụ maka ihe mberede na-echekwa ihe owuwu ahụ ma kpọpụ ndị merụrụ ahụ.
Usoro mgbanyụ ọkụ na ụlọ ọrụ ahụ "nwere ahụhụ CO2 nke metụrụ mmadụ anọ," ndị ọchịchị Catalan kwupụtara.
Ndị ọrụ atọ lanarịrị mmiri ahụ nọ ugbu a n'ụlọọgwụ dị nso na Móra d'Ebre.
Enweghị mgbapụta radieshon sitere na ihe ahụ merenụ, dịka ma ụlọ ọrụ ahụ na ndị ọchịchị obodo siri kwuo.
Osisi Asco na Catalonia enyochala maka mpụta ụzarị ọkụ na Unit 1 reactor na Nọvemba 2007, butere nchụpụ onye isi ya.